Qodobo kooban oo ku saabsan shan hab oo kala duwan si loo soo dajiyo dhamaan bogga loogu talagalay isticmaalka offline
Mararka qaarkood waxaan u baahannahay inaan helno marin udub dhexaad ah inta aan joogno goobtan.Taas awgeed, waa inaan dib u helno faylasha, laakiin inta badan adeegyada martigelinta ma bixiyaan ikhtiyaarkan. Waxaa laga yaabaa inaan rabno inaanu ku dayno qaab dhismeedka goobta caanka ah, iyo sidoo kale si loo ogaado sida ay u egtahay CSS ama HTML faylasha. Wax kasta oo ay dhici karto in laga yaabo, waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad u soo dejisan karto boggaga oo dhan si aad u hesho marin habaabis ah. Isticmaalida mid ka mid ah qalabka hoos ku taxan, waxaad si kalsooni leh u soo dejisan kartaa bogga oo dhan ama tirada loo baahan yahay boggaga. Mar kasta oo ay u baahan yihiin aqoonsi, waxaad dooran kartaa noocyada bilaashka ah iyo in aanad bixin wax qorshe caymis. Qalabkani wuxuu gaar ahaan ku habboon yahay bilowga iyo ganacsiga dhexdhexaadka ah.
HTTrack waa barnaamij caan ah ama software si aad u soo dejiso bogga oo dhan. Aragtida user-friendly iyo casriga ah waxay si fudud u fududeyneysaa shaqada dadka isticmaala. Waxaad ubaahan tahay inaad gasho URL-ka goobta aad rabto inaad xoqato oo aad u soo qaadato xayeysiiska offline.
Waxaad soo dejisan kartaa bogga oo dhan ama waxaad muujin kartaa bogag dhowr ah si aad ugu soo qaadato si toos ah darawalkaaga adag. Waa inaad sidoo kale qeexdaa inta jeer ee isku xirnaanta isku xiran ee aad rabto inaad u furto soo dejinta. Haddii faylka gaarka ah uu qaato waqti aad u dheer si aad u soo dejiso, waxaa suurtagal ah in la joojiyo nidaamka isla markiiba.
Getleft waa barnaamij cusub oo casri ah oo leh waxyaabo badan oo muuqaal iyo isticmaale user-friendly. Marka la soo dejiyo oo la furo, waa inaad ku cadaadisaa "Ctrl + U" si aad u bilowdo. Gali URL oo keydso wicitaanada. Ka hor intaan la soo dajin, Getleft ayaa ku weydiin doonta inta faylasha aad rabto inaad soo dejiso iyo haddii ay ku jiraan qoraallo iyo sawirro. Marka la soo dhameeystiro soo-galka, waxaynu arki karnaa bogga internetka oo dhan.
Noocyada PageNest waxay la mid yihiin kuwa ah Getleft iyo HTTrack. Waa inaad gelisaa cinwaanka bogga oo aad ku soo qaadataa dariiqaaga adag. Isticmaalayaasha waxaa laga codsanayaa waxyaabaha muhiimka ah sida magaca website-ka iyo meesha ay tahay in la badbaadiyo. Waxa kale oo aad dooran kartaa ikhtiyaarka la rabo oo aad hagaajin kartid.
Iyada oo la adeegsanayo Cyotek WebCopy, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho lambarka sirta ah ee horey loo aqoonsaday. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa shuruucda barnaamijkan ugu dambeeyey oo waxaad ka heli kartaa bogga oo dhan si dhakhso ah loogu soo dejiyey isticmaalka offline. Cabbirka wadarta goobta la soo dejiyey iyo tirada guud ee faylasha ayaa lagu muujiyay geeska saxda ah ee mashiinkaaga.
Wikipedia laguma talinayo in aan isticmaalno qalabka caadiga ah sida Import. io iyo Kimono Labs si aad u hesho macluumaadka loo adeegsado isticmaalka offline. Taa baddalkeeda, marwalba waxay kugula talineysaa Dumps Wicitaanka madaama barnaamijkani uu hubinayo natiijooyinka tayada. Waxaad soo dejisan kartaa bogga oo dhan ee qaabka XML, soo saaridda xogta faa'iido u leh boggaaga ama ganacsiga internetka Source .